दशैँपछि २१ कम्पनीको झन्डै ६ अर्बको आईपिओ आउंदै - Digital Khabar
दशैँपछि २१ कम्पनीको झन्डै ६ अर्बको आईपिओ आउंदै
By digitalkhabar On २७ आश्विन २०७८, बुधबार १४:०६
२७ असोज, काठमाडौं । हाल विभिन्न २१ कम्पनीले आईपिओ निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति कुरेर बसेका छन् । हाल धितोपत्र नेतृत्व बिहिन भएकोले लामो समयदेखि बोर्डले कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको छैन ।
तर नेपाल सरकारले बोर्डमा रहेका अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यस स्नागे दशैँपछि ढिलो चाडो बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाउने छ र आईपिओ निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्ने प्रकिया अगाडी बढ्ने छन् ।
हाल २१ कम्पनीलेले गरि कुल ५ अर्ब ९४ करोड ७२ लाख ८९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आईपिओ निष्काशनको लागि बोर्डको अनुमति कुरेर बसेका छन् । नयाँ अध्यक्ष आएमा दशैँ पछाडी यी कम्पनीको आईपिओ आउँन सुरु हुनेछ । यसर्थ दशैँमा केहि रकम आईपिओको लागि छुट्याएर राख्न उपयुक्त हुने छ ।
कुन कुन कम्पनीको कति आउने छ आईपिओ ?
हाल निम्न कम्पनीहरुले आईपिओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । अधिकांशले अंकित मूल्य १ सय मै आईपिओ निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेका छन् भने केहि इन्स्योरेन्स कम्पनीले अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरेर आईपिओ निष्काशनको अनुमति माग गरेका छन् ।
हेर्नुस् कसको कति आईपिओ पाईपलाइनमा?
१. सयपत्री हाइड्रोको ९ करोड बराबरको ९ लाख कित्ता
२.इमार्जिंग नेपाल लिमिटेडको ५ करोड ५५ लाख ६० हजार रकम बराबरको ५ लाख ५५ हजार ६ सय कित्ता
३.जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको ५ करोड २२ लाख बराबरको ५ लाख २२ हजार कित्ता
४. राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको ८ करोड ५० लाख बराबरको ८ लकः ५० हजार कित्ता
५. मोलुंग हाइड्रोको ३५ करोड ३१ लाख बराबरको ३५ लाख ३१ हजार कित्ता
६. रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको १ अर्ब २७ करोड ७२ लाख ६० लाख कित्ता (प्रिमियम समेत थपेर प्रति कित्ता २१२ रुपैयाँमा)
७. उपकार लघुवित्तको २ करोड ६६ लाख २५ हजार बराबरको २ लाख ६६ हजार २ सय ५० कित्ता
८. रिभर फल्स पावरको ३४ करोड ३० लाख बराबरको ३४ लाख ३० हजार कित्ता
९. थ्री स्टार हाइड्रोको १२ करोड ३१ लाख २५ हजार बराबरको १२ लाख ३१ हजार २ सय ५० कित्ता
१०. राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्सट्रक्सनको २९ करोड ४१ लाख ४१ हजार बराबरको २९ लाख ४१ हजार ४ सय १० कित्ता
११. सीवाईसी नेपाल लघुवित्तको ३ करोड ९५ लाख ३३ हजार ६ सय बराबरको ३ लाख ९५ हजार ३ सय ३६ कित्ता
१२. डिश होमको २३ करोड ८५ लाख ९२ हजार ९ सय बराबरको २३ लाख ८५ हजार ९ सय २९ कित्ता (बुक विल्डिंग विधिबाट आउने सम्भावना)
१३. आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको ६० करोडले हुन आउने ६० लाख कित्ता
१४. दोर्दी खोला हाइड्रोको २९ करोड ५१ लाख ९२ हजार ९ सय बराबरको २९ लाख ५१ हजार ९ सय २९ कित्ता
१५. अपर सोलु हाइड्रोको ३३ करोड ७ लाख ५० हजार बराबरको ३३ लाख ७ हजार ५ सय कित्ता
१६. अपर हेवाखोला हाइड्रोको २० करोड बराबरको २० लाख कित्ता
१७. बिन्धवासिनी हाइड्रोको २५ करोड बराबरको २५ लाख कित्ता
१८. हिमालयन हाइड्रोको २२ करोड ५० लाख बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता
१९. बलेफी हाइड्रोको ३६ करोड ५५ लाख ९४ हजार बराबरको ३६ लाख ५५ हजार ९ सय ४० कित्ता
२०. ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको ६२ करोड ५० लाख बराबरको ६२ लाख ५० हजार कित्ता
२१. नेस्ड़ो सम्बृद्ध लघुवित्तको ८ करोड २८ लाख ७५ हजार बर्बर्को ८ लाख २८ हजार ७ सय ५० कित्ता
नेकपा (एमाले) कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा न. ६ को वडा कमिटी अध्यक्षमा उमेश अधिकारी विजयी
गम्भीर दुव्र्यवहार उपर कार्वाही प्रक्रियालाई समर्थन : अराजकता नियन्त्रण सम्बन्धित संस्थाको जिम्मेवारी, राज्यको कठोर कर्तव्य : नेपाली कांग्रेस
इजरेल जाने नेपालीले कति खर्च गर्नुपर्छ र मासिक कति कमाइ हुनेछ